Wiremesh & Fences Factory - Sina Wiremesh & Fences mpanamboatra, mpamatsy
Izahay dia mirotsaka amin'ny fanomezana electro GI Wire avo lenta ho an'ny mpanjifa. Izahay dia manana zavamaniry galvanizing mitohy izay mitondra dingana feno amin'ny filaharana tokana miantoka ny vokatra kalitao tsara indrindra. Manome malefaka bebe kokoa ny fampidirana an-tariby an-tserasera. Ao amin'ny sehatry ny plating dia ampitaina amin'ny alàlan'ny tadiny izay alentika ao anaty vahaolana aqueous misy sombina zinc ka miteraka zinc coating amin'ny tariby mitovy. Aorian'ny fametahana azy, ny tariby dia ampandalovina amin'ny vahaolana fisorohana ny harafesina ary entina amina takelaka mafana hanala ny hamandoana amin'ny tariby ary ahorona ao anaty ala. Ny fijerena maso ny fampangatsiahana sy ny famonoana dia natao mba hahazoana vokatra tsara kalitao. Araka ny takiana gi tariby ho an'ny harato akoho, harato vy, kalitaon'ny fanoratana indray, misy Wire Galvanized Redrawing. Namboarina avy amin'ny karbaona ambany, karbaona antonony ary vy vy avo.
Ny tariby misy annealed mainty dia antsoina koa hoe tariby vy mainty, tariby tsy misy rindrina malefaka ary tariby vy annealed.
Ny tariby apetaka dia azo avy amin'ny fampidirana an-tany. Vita amin'ny tariby vy vy.
Ny tariby apetaka dia manolotra fihenam-bidy sy fahalemena tena tsara amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitsaboana amin'ny oxygen tsy misy oxygen. Ary ny tariby misy menaka mainty dia niforona tamin'ny alàlan'ny fizotran'ny tariby, ny anneal ary ny tsindrona solika. Azontsika atao amin'ny tariby manapaka mahitsy izy io ary manao araka ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
Hot tariby nandrisika nandrisika
Ny Hot Dip GI Wire dia ny fizotran'ny tariby amin'ny alàlan'ny fandroana an-idina zinc miaraka amin'ny hafanan'ny tanky amin'ny 850 F ka miteraka zinc amin'ny velaran-tariby. Ity firakotra ny zinc ity dia manome fanoherana ny harafesina amin'ny tariby ary mampitombo ny faharetan'ny vokatra. Ny tariby nandrisika dia fantatra amin'ny anarana hoe WI Wire, Galvanized Binding Wire, GI Wire, Galvanized Wire, Hot-Dip Galvanized Wire, Galvanized Wires, Coated Wires, Redrawing Galvanized Wire, galvanized iron wire, galvanized wire, Galvanized Steel Wire, Galvanized Iron Wire, Tariby nandrisika boribory, tariby voalavo matevina, tariby mihosin-drano metaly mifono vy.